DENSO | POLLEN (CG) CAF
Pollen (CG) CAF
Green (Charcoal) CAF
သင့်အိမ်မှ လေအေးပေးစက်ကဲ့သို့၊ သင့်ကား၌ တပ်ဆင်ထားသည့် လေအေးပေးစက်သည်လည်း အထူးထုတ်စကာစစ် ပါရှိပါသည်။
သင့်ကား၌ တပ်ဆင်ထားသည့် လေအေးပေးစက် လေစစ်စကာများသည် အတွင်းရော အပြင်မှ လေနှစ်မျိုးစလုံးကို သန့်စင်ပေးပါသည်။
အပိုအစိတ်ပိုင်းရောင်းချသည့် စျေးကွက်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေသည့် DENSO’s COOL GEAR ကားအတွင်းပိုင်း လေစကာစစ် သည် ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်လာသည့် အရာ၊ ဖုန် နှင့် အမှုန်များကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး ကားအတွင်း လေကို သန့်ရှင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
1. အမှုန်အမွှားအသေးလေးများကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည် (ဥပမာ- ဒီဇယ်အခိုးအငွေ့ နှင့် စီးကရက်မီးခိုး) ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လေတိုက်ခက်မှု အရည်အသွေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကားပိုင်ရှင်၏ လက်စွဲနှင့် ထုပ်ပိုးထားသော သေတ္တာအနောက်ရှိ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
DENSO မှ လဲလှယ်တပ်ဆင်ရမည့်ကာလအတွက် တိုက်တွန်းအပ်သည်မှာတစ်နှစ်တစ်ခါ သို့မဟုတ် 10,000km သက်တမ်းအပြီး .ဖြစ်သည်။
လေစစ်စကာအသစ် ၎င်းအား 10,000 ကီလိုမီတာ အသုံးပြုပြီးနောက်
10,000km သက်တမ်းအပြီးတွင် စကာစစ် ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
ဤအချက်သည် လေဝင်လေထွက် အားနည်းမှုနှင့် လေအေးပေးစက်ကို ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့ ဆာင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိစေရန် တားဆီးပါသည်။.
စကာ၏ လေစစ်ခြင်းကို စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည် ပုံမှန်အတိုင်း မကောင်းပါက သန့်ရှင်းသော လေအစား ညစ်ညမ်းသော လေများသည် ကားအတွင်းခန်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စကာစစ်ကို တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် 10,000 ကီလိုမီတာ အသုံးပြုပြီးနောက်တိုင်းတွင် လဲလှယ်တပ်ဆင်ရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။.
အရွယ်အစား အတိုင်းအတာ ဆင်တူခြင်း ထိန်းချုပ်မှု အချက်အလက်အမှန်: ထုတ်ကုန်၏ တူညီသောအရွယ်ကို နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် အသုံးပြုထားပါသည်။
CAF ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် လေစီးဆင်းမှု ဒိုင်ခွက်။
CG တွင် လျော့နည်းသော ဖိအားရှိပြီး A/C လုပ်ဆောင်ချက်သည် CAF တပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင် အားပြင်းနေသေးကြောင်းကို ညွှန်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အား အမြင့်ဆုံး အအေးအား ရရှိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ကို စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။!
အမှုန်များကို စစ်ထုတ်ခြင်း (%)
“အမှုန်များ”ကို CAF က မည်မျှ ထိရောက်စွာ ဖမ်းယူနေသည်ကို ညွှန်ပြခြင်း။
CG ၏ စစ်ထုတ်ခြင်း စွမ်းရည်ထက်မြက်မှုမှာပြိုင်ဘက်များထက် သာလွန် ကာ သင့်ကား ခရီးစဉ်အတွင်း သင်နှင့် သင့်ခရီးသည်များသည် လေထဲမှ အမှုန်အမွှားများအား ပိုမို ကာကွယ်နိုင်မှုကို ရရှိကြသည်။
ဒီဇယ်ကာဗွန်များကို စစ်ထုတ်ခြင်း (%)
“ဒီဇယ် ကာဗွန်” ကို CAF က မည်မျှ ထိရောက်စွာ ဖမ်းယူနေသည်ကို ညွှန်ပြခြင်း။
ပြိုင်ဘက်များနှင့် မတူသည်မှာ CG သည် လေထဲရှိ ဒီဇယ်ကာဗွန် အတွက်လည်း စွမ်းရည် ထိရောက်ထက်မြက်သည်။ဥပမာ ဒီဇယ် မီးခိုး သို့မဟုတ် စီးကရက် မီးခိုး။ လေထုညစ်ညမ်းမှုသည် အလွန်အတွေ့ရများသော ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် မြို့ကြီးတွင် ယာဉ်များအတွက် အလွန် အသုံးဝင်ပြီး များစွာ လိုအပ်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
*ပြိုင်ဖက် A နှင့် B သည် ASEAN ဒေသတွင်းတွင် အဓိက Brand များဖြစ်သည်။2}